Faka umnyango ezinhle kufanele kuhambisane ukufakwa ubuncane ukukhiya ezinhle. Ngokuvamile iminyango metal isinazo e isakhiwo munye 'wabo, nezigodlo ngezinye izikhathi eziningana. Imidwebo zokhuni kufanele uyifake ngokwehlukile.
Rim - izingidi, enamathiselwe ngqo leaf umnyango. Izinqubo ezivamile kuhlanganise: isigwedlo futhi isilinda.
Ukufakwa Izikhiye emnyango sokhuni kusebenta kwato efanele kuncike Ukukhetha kokuqala. Ukuze wenze lokhu, kudingeka wazi ukuthi umehluko.
Umehluko lokuqala Izikhiye iba sezingeni Ukuvikelwa yabo. It iba namakilasi amaningana ezihambisana degree of isivikelo Ukungena ekhaya. Kunezinhlobo ezine kuphela: ezincane naphakathi kuya phezulu futhi ekhethekile. Eyokuqala iyona elula umhlaseli, ngakho lock kuvula imizuzu embalwa, anele engaba mihlanu. Nge Ilokhi avikela naphakathi kuyadingeka ukuba silungise, kodwa ukuphulwa yayo kuzothatha Ningabizi lutho ngaphezu kwemizuzu engu-10. Ukuze ngezinga eliphezulu zihlanganisa nokufakwa ezinjalo, ehlinzekwe nge isivikelo imishini shank kwebhowudu. Ngu yesine, isigaba eliphakeme kakhulu Ukuvikelwa iqukethe sivala ngoba izakhiwo ezikhethekile noma safes. Amadivayisi anjalo akhethiwe ngamunye.
Ngokusho lokhu ngezigaba ukuze zidliwe futhi izakhiwo zomphakathi sivala kufanelekile ukuvikelwa wesibili nowesithathu-class.
Waybill yokuvala emnyango lokhuni has umehluko owodwa ngaphezulu - indlela imfihlo. Lapha-ke ihlukaniswe uMbhalo bese isigwedlo. Eyesibili isetshenziswa njengenhlangano kudivayisi elisizayo, uchitheka kuyodingeka ukushintsha ngokuphelele lock. Emqulwini has kuhleliswa okuthiwa izibungu, okuyinto ovula yokuvala. Waybill yokuvala emnyango lokhuni kungaba eyodwa emaceleni futhi amabili emaceleni. Kuya ngekutsi umuntfu ohlangothini umnyango ke wavula. Ilokhi unilateral kungenziwa ivaliwe ngesandla esisodwa. Kulokhu, okuphambene izoba khona swivel isibambo, isicabha. Bilateral izokhiya, okungase shaqa ukhiye nhlangothi zombili.
Ngokusho isimiso ukusebenza ukuhlukanisa amaqembu amabili izingidi:
- nge isiqhebezo entwasahlobo. Ukuvulwa kwenzeka nge isibambo ngaphakathi, elingaphandle - Ukhiye. Isiqhebezo ngaleyo ndlela Ufakwa izindlu noma inkinobho ekhethekile icindezelwa, ise izindlu.
- Nge isiqhebezo isilungisiwe. indlela okunjalo ngokuphelele ivinjiwe ngenxa esingunxantathu umnyango isiqhebezo.
Kukhona sivala kazibuthe, okuyinto kuhle ukufaka kuphela endaweni lapho ukugeleza amakhulu wabantu. Ngokuvamile kudingeka nje umsebenzi for kokuvula ngaphandle. Amalokhi enjalo kungadinga ezengeziwe ugesi noma ezizimele amandla yenethiwekhi.
Indlela yokwenza isinqumo esifanele Amalokhi?
Isivikelo umnyango kwasekuqaleni ukuvikela lonke ikhaya, ngakho-ke kungcono ukuthi makudle brand owaziwa, okuyinto banesibopho izinga kanye nokwethembeka. Lezi zindlela eziyinhloko indlela ukukhetha ukukhiya waybill emnyango sokhuni:
- nezimfihlo. Kungcono ukuba makudle isilinda esikhundleni isigwedlo indlela. Ishibhile ukusebenza, kodwa okungenani okuthembekile. Kungcono ukukhetha ukukhiya waybill isilinda emnyango sokhuni kudivayisi nezindleko ukulungisa ushibhile kakhulu kunalokho for isigwedlo.
- Ilungu uvala. Lapha, umehluko girder kanti ukungezwakali kwawo. Amaphayiphu ku deadbolt kungaba eziningi izingcezu ezinhlanu, futhi hhayi nje owodwa Monolithic umshudo ulimi.
- Isimiso wokuvula. Mechanical, electronic noma electromechanical. Eyokuqala yalezi yisona esikhulunywa abantu abaningi kanye elula, ngoba ukufinyelela ngokusebenzisa ikhi evamile.
- I ukucushwa kwe umnyango. Indlela ukufaka invoyisi yokuvala emnyango sokhuni, kuye wokuvula yayo? Ayikho imikhawulo ekhethekile, inqobo nje uma i-lock likhethiwe kahle - ilungelo noma kwesokunxele. Ngamunye wabo has a ohambelana wokugubha.
- izakhi engeziwe. Ngokwesibonelo, isiqhebezo esakhelwe, okuyinto ikuvumela ukukhiya umnyango in the isikhundla avaliwe phesheya, kabanga evulekile.
Wayevame esikhundleni izibungu. Ukuze wenze lokhu, kumele wena:
Susa ikhava yokuvala.
Uyasikrufulula iminyango ekupheleni screw ukukhiya.
Esikhundleni saso alethe entsha behlangana konke oda reverse.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinto izinhlobo sivala bill ukulungisa indlela elula, okuyilona elisebenzayo futhi inzuzo enkulu.
Ngokuvamile izingcweti yasekhaya uyazibuza kanjani ukubeka Bill umnyango wokhuni enqabeni? Ukulungele ukufaka ezidingekayo ngemva ukhiye wacosha yibo bonke nemingcele. Ngokuvamile, lokhu kungekho inkinga enkulu, ngakho-ke ungenza ke bebodwa, ngaphandle kosizo ochwepheshe. Kuphela uma umnyango uhlukile noma eqolo, lena indlela engcono ukuze uchithe ngenxa amathuba ukulimala ngendwangu. Amathuluzi kwezibambo zesihluthulelo evamile futhi umnyango kuyoba eyisisekelo kunazo. Lawa: i sokuprakthiza kagesi nge sokuprakthiza futhi izingcezu zibe yizinkuni, ishizolo, ukufakwa kokumqoka kuphela, isando, ngoba wokugubha - square noma roulette. Ngesikhathi amakhosi izikebhe zabo, kukhona imizila okhethekile usebenze hhayi kuphela umhlangano okusheshayo enqabeni, kodwa futhi izinga eliphezulu kakhulu. Ukuze ukufakwa kwesikhathi esisodwa kwama-handyman zinsizakuphila kungathí shu, ngoba izindleko akuyona ezishibhile.
Ukuze ngesandla usethe lock invoyisi isilinda emnyango sokhuni, udinga amathuluzi ezilandelayo: sokuprakthiza, kagesi noma mathupha, sokuprakthiza ke; ipensela; ukufakwa kokumqoka kuphela; nezikulufi; kwesando ishizolo.
Ngaphambi kokufaka, qiniseka ukufunda exhunywe wesifunda yokuvala. Ukukhweza izinyathelo kanje:
- Yenza uphawu umnyango kuvuleka esizayo, ukuze zisebenze lock blade.
- Gubha imigodi ngezikulufo, kanye nokusetshenziswa kangcono sokuprakthiza alunywe ohlabayo kuka screw, khona-ke uyoba zabelwe enokwethenjelwa kakhulu.
- Drill isiteshi core.
- Beka lock emnyango bese uthatha isibungu.
- Bracket kokungathembeki enamathiselwe uzimele umnyango. Ngemva kwalokhu Ilokhi bill emnyango sokhuni, ukufakwa zazo sekuyaphela, udinga ukuhlola ukusebenza, uma kungekhona umnyango futhi Uhlaka benani nomunye, kungenzeka ukulungisa zonke izinto.
Ngesikhathi ukuphakama umnyango ukukhiya ukufakwa esezingeni iqala ichashaza elenziwe, esiwuphawu ingxenye eyodwa kwezintathu ubude kusukela phezulu ngendwangu. Ngokuvamile ukuze imiyalelo yokufaka kungukuthi okwenza ingxenye lapho alinganisiwe isikhungo indawo kudivayisi. Ngakho-ke kuyadingeka ukwenza okulandelayo:
- Yenza isakhiwo usebenzisa ipholigoni futhi sokuprakthiza emgodini sokuprakthiza.
- Shano wabuka ingidi ephepheni - kuzoba isifanekiso. Okulandelayo ukuthatha sokuprakthiza, ububanzi okufanele zivumelana ubukhulu isilinda, ukuze bayamba esihlalweni okwesikhathi isilinda. Ingabe umsebenzi ongcono nhlangothi zombili, ukuthi kwakungekho chips xaxa ngezihluthu ebusweni.
- Beka uMbhalo endaweni wazalela lelungiselelwe, ukulungisa umzimba idivayisi nge samrezov. Ngaphandle kahle ukhiye ipuleti isethi. Kungcono ukukhetha ukukhiya waybill isilinda emnyango sokhuni, idivayisi kanye nokulungiswa okuzoba ishibhile kunokuba isigwedlo.
- Emva kwalokho, vula yokuvala bese ucindezela ku ebhokisini. Kuleli qophelo, kufanele kuphawulwe ukuthi indawo lapho lo mshini ukukhiya itholakala. Ukuze wenze lokhu, maka yasenhla nemithombo yasenzansi umshudo ipuleti. Kule ndawo kuba ezizibeni umzimba nemishudo zizungezwé uhlaka yayo ngepeniseli.
- Yenza usebenzisa kahle sokuprakthiza noma ishizolo, ukuze emaphethelweni umnikazi ipuleti kwaqondana doorframe.
Ngemva kwalokho, lokugcina esiteji - ukufakwa control. Uma ukhiye nokusebenza ngendlela efanele, kungenzeka ukulungisa yi.
Kolwelwesi ezinganeni: Izimpawu kanye Ukwelashwa. Ukudla kolwelwesi
Imihlobiso Original for engadini ngezandla zakhe